Sh.Yacquub:Shacabka Galguduud way iska diideen Gumeysiga Xabashida Itoobiya Dhageyso.
Saturday August 08, 2015 - 19:55:00 in Wararka by Super Admin
Wilaayada islaamiga Galguduud ayaa faah faahin dheeri ah ka bixisay dagaallo maalmihii lasoo dhaafay deegaano gobolka katirsan ku dhaxmarayay muslimiinta iyo ciidamada soo duulayaasha Itoobiya.
Sh/Xassan Yacquub Cali waaliga wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud oo boqolaal dad weyne ah kula hadlay masjid ku yaalla Galguduud ayaa ka war bixiyay dagaallo culus oo Xabashida Itoobiya ku qabsaday qaar kamid ah degaanada wilaayada oo ay dhaqdhaqaaq ay ka sameysay.
Sheekhu waxa uu amaanay bulshada ku dhaqan wilaayada oo gabi ahaanba diiday in ay ku hoos noolaadaan Xabashida Itoobiya oo cadaawad gaamurtay kala dhaxayso ummada Soomaaliyeed.
Inta uu hadalka jeedinayay waxa uu soo qaatay tusaalooyin badan oo muujinaya sida dadka muslimiinta ah loogu leynayo meel walba, waxa uu ka waramay xasuuqa iyo qixinta lagu haya shacabka muslimiinta ah ee reer Borma iyo kuwa kale.
Sheekh Xasan Yacquub ayaa xaqiijiyay in ciidamada gumeysiga Itoobiya jab lixaad leh lagu gaarsiiyay dagaallo malxamad ahaa oo 10-kii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanada Warxoolo iyo Ceel-lahelay.
Halkan ka dhageyso Sh.Xasan Yacquub Mp3
Iska hor'imaadyo ka dhacay deegaannada Lafoole iyo Hoosingoow.